HomeSuuqa kala iibsigaKooxaha Man United iyo Arsenal oo ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahan Christian Erisken
Manchester United iyo Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay loo sheegay inay bixiyaan 27 milyan ginni si ay helaan kubad sameeyaha reer Denmark Christian Erisken kaasoo ka tagaya San Siro bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Spurs ayaa xor u ah inuu ka tago San Siro inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, isagoo ku dhibtooday inuu sameeyo hormar tan iyo markii uu ka yimid Spurs horaantii sanadkan.
Danmark International ma sameyn wax gool ah ama caawiye sideed kulan oo heer kooxeed ah xilli ciyaareedkan, halka uu ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto kaliya afar jeer iyo seddex caawin 34 kulan oo uu u saftay Inter tan iyo markii uu yimid.
Arsenal iyo Man Utd ayaa labaduba lagu tiriyaa inay xiiseynayaan kubad sameeyihii hore ee Tottenham, kaasoo ka qeyb qaatay 69 gool iyo 89 caawin 305 kulan uu u ciyaaray kooxda ka dhisan London intii u dhaxeysay 2013 iyo 2020.
Sida laga soo xigtay Tuttosport, kooxda culus ee Talyaaniga ayaa ku wargalisay labada ciyaaryahan ee Premier League inay dalab 27 milyan oo ginni ah ay ku filnaan doonto inay ka kaxeyso Erisken San Siro.
28 jirkaan ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inuu soo jiito indhaha kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund, si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka laftiisa ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu u ciyaaro koox Premier League ah mar kale taasoo fursad siineysa Arsenal iyo Man Utd inay la soo saxiixdaan. .